Dowladda oo daah-furtay Istaraajiyadda Qaran ee Xalka-waara | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda oo daah-furtay Istaraajiyadda Qaran ee Xalka-waara
Dowladda oo daah-furtay Istaraajiyadda Qaran ee Xalka-waara
Munaasabadda Daah-furka oo ahayd mid fogaan araga “Zoom” ayaa lagu soo bandhigay Istiraatiijiyadda Qaranka ee Xalka Waara (NDSS).
Istiraatiijiyadan ayaa ahmiyad weyn siinaysa sidii wax looga qaban lahaa barakaca daba-dheeraaday iyo sidii Xal-waara loogu heli lahaa dadka barakacu saameeyay ee ay ka mid yihiin barakacayaasha gudaha iyo qaxootiga soo guryo noqday.
Kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay Wasiiro uu ka mid yahay Wasiirka Qorsheynta Somaliya, kooxda Farsadamada Wasaaradaha Dowladda Federaalka, Dowlad Gobaleedyada, Maamulka Gobalka Banaadir, Beesha Caalamka, Bulshad Rayidka iyo Ganacsatada.
Wasiirka Qorsheynta, Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay qorshaha Xal-waara ee afarta sano ee soo socota lagu meeleynayo barakacayaasha.
“Guul weyn ayey u tahay umadda Soomaaliyeed iyo dowladdooda sababtoo ah siyaasadda Xalka-waara horaa loo sameeyay, tana waa istiraatiijiyaddii lagu fulin lahaa siyaasaddaas. Waddanka waxaa jooga hay’addo ciiddaa ka badan oo kuligood ka shaqeeya arimaha barakacayaasha iyo qoxootiga, inta badan waan leeyihiin siyaasaddii barakacayaasha, laakiin istiraatiijiyaddii xal waara loogu heli lahaa ayaa ka maqneyd, tiina waa tan, hadda wixii ka danbeeya waxaan ka rabnaa in ay raacaan istiraatiijiyadaas.” Ayuu yiri Wasiirka.
Kuxigeenka Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somaliya, Adam Abdelmoula ayaa ku boggaadiyay Wasaaradda Qorsheynta diyaarinta Istaraajiyadan oo saamayn muuqato ku yeelan doonta xalinta mushkilidda 2.6 milyan oo baracyaal ku ah gudaha dalka.
Istiraatiijiyaddan waxa ay diiradda saareysaa, sidii Xal-waara loogu heli lahaa afarta sano ee soo socoto arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga soo guryo noqanayo, ayna helaan xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka.
Previous articleMaamulka Cadaado oo la wareegay gaari Dab Demis (SAWIRRO)
Next articleMahad Salaad “Wixii na soo gaara waxaa ka masuul ah Gudoomiye Mursal”